416 June 16, 2015
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကျောက်မဲမြို့ခရိုင်ပြည့်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်မရှ်ိပါ ခွဲစိတ်ဖို့လိုအပ်လာရင် မန္တလေး ကိုသွားရပါတယ် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်မြို့ထက်သေးတဲ့သီပေါနဲ့ နမ့်လန်တို့ကိုသွားရပါတယ် ခရိုင်မြို့ဖြစ်ပြီးဒီလိုဖြစ်နေတာတာအရုပ်ဆိုးလွန်းသောကြောင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးသိစေရန် Talk2dvb မှတစ်ဆင့်အသိပေးလိုက်ပါတယ် – အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ လစာတိုးတဲ့အခါ နေ့စားဝန်ထမ်းတွေ ပါ/မပါ ? ဆိုတဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၁ရက်နေ့က စပြီး ဝန်ထမ်းတွေလစာတိုး ခဲ့ပါတယ်။ အခြေခံ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လစာကို ( ၁၂၀၀၀၀) လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ခုထိ နေ့စား ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လစာက ယခင်က ထောက်ပံ့ကြေးဆိုတာနဲ့မှ ခြောက်သောင်း( ၆၀၀၀၀ ) ကျပ်ဝန်းကျင်သာ ယခုထိ ခံစားခွင့်ရထားသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နေ့စားဝန်ထမ်း လစာများနဲ့ အနည်းဆုံးလုပ်ခ အမြန်ဆုံး သတ်မှတ်ပေးစေလိုကြောင်း -မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်ဦးခရိုင်ညောင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာလိုင်စင်မရှိပါပဲနှင့်စားသောက်ဆိုင်များဖွင့်လှစ်ပြီးအရက်ဘီယာများကို နယ်မြေခံရဲတပ်ဖွဲ့များထံလစဉ်ကျေးပေးပြီးဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေကြပါသည်တရားဝင်လိုင်စဉ် ရယူဖွင့်လှစ်နေကြသူများမှာတနှစ်ကိုလိုင်စင်ကျေး(၁၂)သိန်းပေးဆောင်နေရပါတယ် လိုင်စဉ်မရှိသူတွေကတော့ရဲကိုတစ်လတစ်သောင်းခွဲလောက်ပေးရုံနဲ့စိတ်ကြိုက်ရောင်းလို့ရနေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း -ပြင်ဦးလွင်မြို့မှာ လောင်းကစားရုံတွေ တရားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးထားသလား …Read more »
Talk2DVB (၆ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၅)
441 April 2, 2015
06-01-2015 နေ့တွင်ထုတ်လွှင့်မည့် Talk2DVB အစီအစဉ်…. ဘာနတ်ကြီး-ဇောင်းတူကာလမ်းမကြီးကို ပွင့်လင်းရာသီရောက်ရင် ပဲခူးမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံးက လေလံဆွဲထားတယ်ဆိုပြီး ဆိုင်ကယ်ပါမကျန်ကြိုးနဲ့တားပြီး ငွေကောက်ခံနေသော ကိစ္စ– တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်မြင်ခဲ့သေူ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများမှာ မိမိတို့တတ်ေ၇ာက်လိုသော ဘာသာရပ်ကို လျှောက်ထားကြပါတယ် သို့သော် အမှတ်မမီသောကြောင့်ဖြစ်စေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မရရှိခဲ့ပါက မသင်ယူလိုသော ဘာသာရပ်ကို မချပေးသင့်ပါ ။ကျောင်းသားများက မသင်ယူလိုသောကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ရခြင်းမှာ အလုပ်နှစ်ခါရှုပ်ရပါသည်ဆိုသော တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား/ သူများ၏ အခက်ခဲများး- ကော့သောင်းမြို့တွင်လူကြီးလူငယ်မရွှေး မူးယစ်ဆေးဝါး ပေါ်ပေါ်တင်တင် သုံးစွဲနေသလို ရောင်းချသူများမှာလည်းးပိုများလာသောကိစ္စ– မြန်မာ့ရှေ့ဆောင် (သထုံ)ဘဏ်ခွဲ မှ မြေဧရိယာအလွတ်ရှိသော်လည်း သောက်သုံးရေကန်နှင့် ၈ပေခန့်အကွာတွင် အိမ်သာကျင်းတူးဖော်ထားသော ကိစ္စ– မွန်ပြည်နယ် မုဒုံမြို့တွင် လမ်းမီးမကောင်းသောကြာင့် ဓါတ်တိုင်ကို ဆိုင်ကယ်ဖြင့်ဝင်တိုက်မိပြီး ဆိုင်ကယ်သမားဆေးရုံပို့ရန် GSM ဖုန်းဖြင့်ဆတ်ရာ ဖုန်းလိုင်းမှာ …Read more »
567 September 2, 2015
1231 August 16, 2016
DVB TV – အနယ်နယ်အရပ်ပေးပို့လာတဲ့ စာများကိုကောက်နုတ်တင်ဆက် talk2dvb အစီအစဉ်
515 June 17, 2015
Talk2DVB (၁၃ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၅)
13-01-2015 နေ့တွင်ထုတ်လွှင့်မည့် Talk2DVB အစီအစဉ်တွင်…. ဖားကန့်ဒေသတွင် ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရာတွင် စည်းကမ်းမဲ့စွာတူးဖော်ခြင်းသည် ချင်းတွင်းမြစ် ဘေး အောက်ပြည်အောက်ရွာများ မြစ်ကူးတံတားများ တစ်နေ့ပျက်စီးခြင်း နှင့်မလွဲမသွေရင်ဆိုင်နိုင်ရကြောင်း—- မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြိုင်မြို့တွင် ဆောက်လုပ်ရေးမှ မြိုင်-ဗဟင်းလမ်းမကြီး တည်ဆောက်ရာတွင် နိုင်ငံတော်၏စေတနာ ကိုသိမြင်ပြီး ဝမ်းသာကျေနပ်ကြာသော်လည်း လမ်းသူ လမ်းသားများဒုက္ခရောက်နေရခြင်းကိစ္စ— ပညာရေး ဝန်ထမ်းများ သက်ပြည့်ပင်စင်ယူရန်တစ်နှစ် အလိုတွင် တဆင့်တိုးလစာ ခံစားခွင့်ရှိသည် ဟုသိထားရပါသော်လည်း ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိ ဝန်ထမ်းများမှာ အခွင့်အရေးများ မခံစားရခြင်းကိစ္စ— ရန်ကုန်မြို့တွင် ယာဉ်ကြောများပိတ်ဆို့နေခြင်းကြောင့် ဦးနေဇော်နိုင်ပြောပြတဲ့ လမ်းတွေသွင်းမယ်ဆိုတာ မြန်မြန်သွင်းခိုင်းပြီး အရမ်းသွင်းရင်လညိး လူကြောတွေပိတ်မှာဆိုးတဲ့ အကြောင်းအရာ— ပုဂံညောင်ဦးတွင် ခရီးသွားဧည့်သည်များ ဧည့်လမ်းညွှန်လို အပ်နေသောကိစ္စ— သထုံခရိုင် ဘီးလင်းမြို့နယ် ဝင်းကကျေးရွာ တွင် တည်ရှိသော ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် အားပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် တင်ပြထားခြင်း ကိစ္စ— …Read more »
Talk2DVB (စက်တင်ဘာလ ၂၂ရက်)
912 September 22, 2015
စက်တင်ဘာ (၂၂)ရက်နေ့မှာထုတ်လွှင့်မယ့် Talk2DVB အစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ – – ၀မ်ကန်ရတနာမြေမှ ပြည်သူတွေရဲ့မဲပေးခွင့် မသိရှိရသေးတဲ့အကြောင်း ၊ – ပြည်မြို့၊ ရွှေဆံတော်ဘုရား နာရီစင်အနီးက လမ်းဘေးရွှံ့ဗွက်အိုင်ကြီးအကြောင်း ၊ – ၀န်ထမ်းချင်းတူပေမယ့် ခွဲခြားခံနေရတဲ့ ကာယ ဆရာ/ဆရာမတွေအကြောင်း ၊ – ညောင်ဦးမြို့အရှေ့ဘက်က သောက်သုံးရေပြတ်လပ်နေတဲ့ ကျေးရွာတွေအကြောင်း ၊ – စည်ပင်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးရဲ့ခံစားချက် အပါအ၀င် ပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲများစွာကိုဖတ်ကြားပေးထားပါတယ်။ တင်ဆက် – သီတာ ၊ မျိုးသာထက် ရိုက်ကူး – အိသူဇာ ၊ နန်းသိင်္ဂီ၊ ၀င်းကျော်သူ တည်းဖြတ် – နန်းသိင်္ဂီ